Ukuqinisekiswa ukuhambisana - ke isiqinisekiso sokuthi imikhiqizo noma ezinye izinto athobele nemibandela ukudayiswa kanye nokulahlwa, isitoreji, ukusetshenziswa, izinqubo zokukhiqiza, imigomo yesivumelwano, izinhlinzeko zoMthetho idokhumenti amazinga. Endabeni izimpahla imikhiqizo eminyakeni yamuva nje siye babe imibhalo ebalulekile ukuqinisekisa ukuhambisana komkhiqizo, okuyinto ilethwa, izidingo asethwe e amazinga kanye namanye amaphepha emvume normative.
Amafomu sokuhambisana - yinqubo okuyiwona kukhona isitifiketi nesikhathi imikhiqizo noma izinto lamalungelo emithetho kanye nemibandela iziqondiso lobuchwepheshe, imigomo izivumelwano, kuba documentary.
Amadokhumenti anjalo asekelayo - umphumela inqubo, iqhaza amaqembu amathathu. Njengomthetho, abantu abahilelekile kukhona abathengi (party lokuqala) kanye nabaphakeli (iqembu lesibili). Umuntu wesithathu kuyinto umuntu noma umgwamanda eyamukeleke ezimele endabeni ahilelekile. Njengomthetho, abantu abahilelekile kukhona izithakazelo abathengi (party lokuqala) kanye nabaphakeli (iqembu lesibili).
Imashi ukuhambisana migomo: kuqinisekisa ukuhambisana izimfihlo commercial maqondana ulwazi etholakale ekusebenziseni ukuhlolwa nesikhathi; ukudalwa izimo ezithile endaweni izimpahla Russian Ungahambisa ngaphansi okuyinto ngokukhululekile, kanye ukuhwebelana kwamazwe omhlaba, lwesayensi kanye nezobuchwepheshe international nokubambisana kwezomnotho; ekuthuthukiseni ukuncintisana imisebenzi, imikhiqizo kanye namasevisi e izimakethe zasekhaya nasemazweni angaphandle; usizo abathengi wenze ukukhetha afanele amasevisi, usebenza kanye nemikhiqizo; Isitifiketi Sivumo ka Production izinqubo, ukukhiqizwa, ezokuthutha, isitoreji, ukusetshenziswa, ukudayiswa kanye nokulahlwa, amasevisi, imisebenzi, noma ezinye izindinganiso izindawo, iziqondiso lobuchwepheshe, nemibandela izinkontileka.
Izimiso ukuhlolwa nesikhathi zimi kanje: i-inadmissibility wokumelana yakhe isitifiketi yokuzithandela; nokuvikelwa kwempahla izithakazelo izicelo, ukukhuthazwa izimfihlo zokuhweba maqondana ukwaziswa okuye kwakhishwa lapho ukuhlolwa nesikhathi kwenziwa; ukungabi nakwenzeka kwento ukuphoqwa ukuqinisekisa ukuthi isiqinisekiso kwenziwa ukuhambisana ngokuzikhethela, kuhlanganise uhlelo oluthile isitifiketi yokuzithandela; kuncipha isikhathi yokuqeqeshelwa nesikhathi nekuhlolana batsengi; wokubhala uhlu lwemibhalo izikimu kanye namafomu mayelana nemikhiqizo ethile; ukungakwazi ukusebenzisa lesi siqinisekiso oyisibopho nalezo zinto, ezingalotshwanga ecacisiwe izidingo zomthetho; ukutholakala kolwazi mayelana nendlela sokuhambisana ukuze abantu abanentshisekelo ke.
isiqinisekiso athuthukisiwe futhi isicelo afanayo ngokulinganayo futhi ngokulinganayo kungakhathaliseki indawo kanye nezwe izinqubo ukukhiqizwa imvelaphi, ezokuthutha, isitoreji, ukusetshenziswa, kulahlwa.
Akuvunyelwe ukuzijayeza esikhundleni of yokuzithandela nesikhathi ukuhlola.
Zokuzithandela nesikhathi ukuhlola Kwenziwa ngesisekelo isivumelwano phakathi izinhlangano zezitifiketi kanye izmhiaka ekuthatheni isinyathelo umfakisicelo ngesimo isitifiketi yokuzithandela. Endabeni yokukhiqizwa, ukukhiqizwa, ukusetshenziswa, isitoreji, ezokuthutha, ukudayiswa kanye nokusetshenziswa nezinsizakalo nemisebenzi, kanye nezinye izinto, usungula izidingo izivumelwano, ngokuzithandela isitifiketi izinhlelo kanye nemigomo, angaphansi izitifiketi yokuzithandela.
Ukuthuthukisa ezimali neziqu - indlela wokunyusa
Amanda Tapping (Amanda Tapping) - Filmography kanye Biography of actress